Iingxaki ezisixhenxe zokuNgqubana noRhwebo loLuntu | Martech Zone
Iingxaki ezisixhenxe zokuNgqubana noRhwebo loLuntu
NgoMvulo, Aprili 3, 2017 UKevin North
Urhwebo lwentlalo iye yaba ligama elikhulu, kodwa abathengi abaninzi kunye nabathengisi abaninzi bazibamba "ekuhlaleni" ngokuthenga nokuthengisa kwabo. Kutheni le nto?
Ngenxa yezizathu ezifanayo kuthathe iminyaka emininzi kwi-e-yorhwebo ukukhuphisana kakhulu nentengiso yezitena nodaka. Urhwebo lwentlalo yinkqubo yendalo engekavuthwa kunye nengcinga, kwaye kuyakuthatha ixesha ukuyicel 'umngeni indalo yentengiselwano eneoyile e-commerce namhlanje.
Imiba mininzi, kwaye ukubakho kwengxoxo engacacanga kukhulu, kodwa kwinqanaba lomfanekiso omkhulu, nazi izizathu ezithandathu zokuba kutheni urhwebo lwentlalo lungenzeki nje ngendlela enkulu okwangoku:
Kukho iingxoxo malunga nokuba yintoni urhwebo lwentlalo. Injalo Facebook Marketplace? Ngaba ziiapps ezinje OfferUp kwaye Yekela, Ebonakala ngathi kukuphoswa nje lilitye Craigslist? Ngaba yimirhumo enoluntu olusebenzayo CrateJoy? Ngaba kukuphinda ujonge intengiso kwintanethi? Ngaba kwabelana nge EBay udweliso kwimithombo yakho yeendaba zosasazo? Ngaphambi kokuba urhwebo lwentlalo lususe, kufuneka lukhulise iziko lomxhuzulane. IAmazon kunye ne-eBay lelo liziko kurhwebo lwe-e. Akukho nto ifanayo kwezorhwebo.
Abathengi abayikhangeli. Ngaphezulu kweepesenti ezingama-50 zabathengi be-e-commerce abadumileyo baphethukela kwiAmazon kuqala xa bethenga kwi-Intanethi. Unokubheja ukuba i-eBay ithatha enye i-chunk enkulu yaloo ngqwalaselo. Zingaphi iibhola zamehlo ezifunyanwa ngorhwebo lwentlalo? Ungabheja ukuba ayisiyiyo phantse isiqingatha sezigidigidi ezithi i-eBay kunye neAmazon zidibane kunye njengeziseko zabathengi abathengi.
Amava okuthenga-kunye nokukhetha-zibi kakhulu. Njengevenkile, ukuba uneeakhawunti ze-eBay kunye ne-Amazon.com, ungathenga ngayo nayiphi na into ethengiswayo naphina emhlabeni. Kwezorhwebo kwezentlalo, imveliso kunye nokukhetha umthengisi zisasikelwe umda, kwaye kuya kufuneka uphume uye kuzifumana, unqumla iisayithi ezininzi kunye neepropathi. Ingxaki yenkukhu kunye neqanda: iimveliso ezimbalwa zithetha abathengi abambalwa kunye nokugcwala kwetrafiki-oko kuthetha ukuba bambalwa abathengisi-okutya ingxaki. Okwangoku, abathengisi abaninzi bakhetha ukuthengisa apho uninzi lwabathengi bakhoyo, oko kukuthi kulapho uninzi lweemveliso ezikhoyo, nazo.
Abathengi abanakho ukurhweba ngorhwebo ngaphandle kokucinga. I-E-commerce ine-funnel yokuthengisa kunye nenkqubo yokuguqula ukuya kwisayensi. Inkulumbuso yeAmazon ngowona mzekelo ubalaseleyo apha, kodwa i-eBay ithathe amanyathelo amakhulu kule minyaka idlulileyo ngokunjalo. Abathengi banokuthenga izinto ezinkulu kwiimarike ngokungxama, kungabikho kungqubana — kodwa induli yokunyuka ukuze ufumane imveliso, ukuqonda inkqubo yokuthengiselana, kunye nokugqibezela intengiselwano yorhwebo lwentlalontle inyuke kakhulu kwaye ayiqikeleleki. Oko kuthetha ukuba amaqondo okuguqula asezantsi avela kubathengisi-ukusuka kwidama esele lincinci kakhulu
Iingxaki zentengiselwano ngokukhawuleza. Kwi-eBay okanye eAmazon, zonke iinkcukacha zokugqibela zentengiselwano-kuvavanyo lomthengisi ngabathengi, ukuqinisekiswa koku-odolwa, ukulandelelwa kokulandela, ukubuyisa kunye nokutshintshiselana, iimbambano kunye nokusonjululwa kwempikiswano- zisingathwa kakuhle kwaye zisuka kwindawo enye, esembindini enokulawulwa zimbalwa ukucofa. Abanini bewebhusayithi abazimeleyo nabo batyale ukubila kunye needola ukuzama ukukhuphisana neli nqanaba, kwaye ngesizathu esihle-oko kutsala abathengi njengeshishini lamntu. Kwezorhwebo kwezentlalo, imithetho yasendle yasentshona isasebenza, njengoko benzayo kwi-eBay ngo-1999.
Ukukhathazeka ngemfihlo kunzima ukohlula. Imiba yabucala yabathengi iyanda kule minyaka idlulileyo, kwaye ayilahlekanga yiyo zentlalo isoloko ilifutshane uqokelela idatha yam kwaye ayisebenzisele inzuzo. Kubathengi abaninzi, ezentengiso izandi kakhulu ngathi Ubucala obuncinci, umngcipheko omkhulu. Kuya kuthatha ixesha, iziseko zophuhliso, indaleko, kunye nokwazisa ngezi zinto zixhalabisayo. Okwangoku, abathengisi abacinga ukuba baya kuchaphazela amaxabiso okuguqula ngokuqinisekileyo balungile.
Ukuthenga kuhlala kungumsebenzi ohlukileyo. Oku kunokuvakala ngathi yinto ecacileyo ukuyithetha, kodwa uninzi lwabasebenzisi beendaba zentlalo abakulungelanga ukudibanisa ubudlelwane kunye nokuthenga. Abazange bayenze ngaphambili, kwaye akukho mithetho okanye imikhwa ikhoyo yokuqhuba abasebenzisi beendaba zosasazo ukuba bacinge ngokuthenga njengoko benxibelelana-okanye ngokuchaseneyo. Abathengi ngoku abanalo zentlalo ingqondo xa uthengela okanye a ezivenkileni ingqondo xa usonwabisana. Kuya kuthatha iminyaka ngaphambi kokuba benze lo mbutho.
Ukuba ungumthengisi uyazibuza ukuba akunjalo okanye hayi kufanele be kwezorhwebo, ungoyiki. Ngezi zizathu, awusayi kuphoswa kakhulu okwangoku. Okanye, ukubeka ngenye indlela, unokufumana ubuncinci ubuncinci ngokuphindaphinda kabini kunye nokucokisa iinzame zakho kwiindawo zentengiso ezinkulu, apho uninzi lwabathengi lukhona, kwaye apho ukhuseleko kunye nokuqikelelwa komthengi kunye nomthengisi ngokufanayo kuphezulu kakhulu.
Ke kubathengisi abaninzi, olona luvo lulungileyo okwangoku kukukwenza into oyenzayo nokuba kunjalo-ukwanelisa abathengi, ukubonelela ngenkonzo enkulu, ukukhulisa ishishini lakho ngobuchule-kunye nokwamkela naziphi na iindlela ezintsha okanye ujolise kuzo naziphi na iimarike ezintsha ngaphakathi kweso sikhokelo. Zonke ezinye ziya kuzikhathalela.
tags: AmazoncraigslistukonwabaebayIndawo yentengiso ye-facebookyekelaukunikelaezentengisoiingxaki zorhwebo ekuhlaleni
UKevin North nguMongameli kunye ne-CEO ye I-Terapeak, apho inoxanduva lombono wenkampani, iqhinga, ukukhula kwengeniso kunye nokusebenza kweshishini.
Zeziphi izinto eziBalulekileyo ze-SEO ku-2017?